LAPA — Tsara Soratra
Mandraraka ilo manitra ny rivotra malefak'ilay ora tsy nihodina. Mihararetra mora manaraka ny lantony ny felam-bony vao; haingon'ny natiora mipentina hosodoko: Ny mangan-dranomasina mivolom-pahatsiarovana, ny sila-dokon-danitra, ilay maitsomaitso mavana manaitaitra nofy, ny ravaky ny mavo fanaperana. Makamaka volon'ilay Antsibenandriamanitra nifaliana havanja rehefa tsahatra orana, fony fahazaza...
Nahiratro ny masoko ka indro aho varimbarina! Mirana amin'ny tsikiny ny endri-java-boahary. Mirenty ny hatsaràny tsy manam-paharoa ilay volana bolangina. Adino ny eritreritra fa nofy zary velona no itafian'ny nofo...
- Ho avy izao ianao! Tsy ho tafandry mandry vao inay iantefàn'ity vetso-poko maniry ny hovangiana.
Maitia malala fa ny eto mahasondriana! Toerana fianohan'ny kanto midadasiky ny tefy nanahary. Ivo mampitambatra ny lanitra sy tany. Ony iray mihodidina ny mamy tsy miafàra. Kamory manga lalina mirakotra ny taratry ny kintana...
Toy izany ny ato am-poko! Loharano miboiboika Fitiavana tsy mety ritra.
... Lapa iandrasako anao!